Maxaa kasoo baxay shirkii nabadda Hobyo? – Hornafrik Media Network
Maxaa kasoo baxay shirkii nabadda Hobyo?
By Liibaan Nuur	 On Sep 5, 2019
Shir magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug 50-kii cisho ee lasoo dhaafay uga socday beelsha Habargadir ayaa lasoo gaba-gabeeyay Khamiista maanta.
War-saxaafadeedka laga soo saaray sharkaas ayaa u qornaa sidaan:-
Shirka Nabadda Hobyo waxey qabanqaabadiisu ka soo bilaabatay magaalada Muqdisho muddo sanad ah ka hor, waxaa saldhig u ahaa kulamo taxane ah oo lala yeeshay wasiirada xukuumadda federaalka, xildhibaanada labada aqal ee Barlamaanka Federaalka ah, siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka, culimada, dhallinyarada, haweenka iyo ganacsatada beesha Habargidir, ayagoo sidoo kale guddiga qabanqaabadu socdaal wadatashi ku soo kala bixiyey deegaamada beeshu degto ee Galmudug sida Dhuusamareeb, Cadaado, Gaalkacyo iyo Hobyo halkaas oo ay kula soo kulmeen madaxda dawlad-goboleedka Galmudug u sarraysa, odoyaasha dhaqanka iyo qeybaha kale ee bulshada.
Wadatashigaas mudada sanadka ah socday ka dib waxaa waxgaradka kala duwan ee beesha Habargidir isku waafaqeen baahida loo qabo qabashada shirweyne beeshu ay yeelato oo bilow u noqda soo afjaridda colaadihii ka dhashay dagaaladii sokeeye ee dhexmaray beelaha Soomaaliyeed iyo dhab u heshiisiin ka timaada ayaga dhexdooda, waxaana loo asteeyey in shirkaas uu ka dhaco magaalada qadiimiga ee Hobyo taariikh 15 July 2019.
UJEEDADA SHIRKA NABADDA HOBYO
1. In Beelaha Habragidir ay turxaan-bixiyaan, kana heshiiyaan tabashooyinka dhexdooda ka jira isna cafiyaan.
2. In ay dhistaan Gole Hogaamineed oo taladoodu ay ku midaysan tahay.
3. In kaalinta ugu haboon ay beeshu ka qaadato nabadaytna, dhab ula heshiinta beelaha Soomaaliyeed ee kale iyo ka qeybgqaadashada dib u xaqiijinta qarannimada Soomaaliyeed oo beeshani ay weligood kaalin hormuudnimo ka qaadan jirtay.
MARXALADAHA SHIRKA NABADDA HOBYO UU SOO MARAY
Shirka Hobyo mudadii 50-ka maalmood ahayd ee uu socday waxaa si isdaba joog ah u imaanayey ergooyin iyo wufuud dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ka kala socdey kuwaasoo tiradoodu ay kor u dhaaftey 2000 oo qof.
Marxaladaha shirka Nabadda Hobyo uu soo marey waxaa ka mid ahaa; furitaankii shirka iyo diyaarinta ergooyinka rasmiga ah ee ka qeybgaleyey shirka. Iscafinta iyo adkaynta midnimada beelaha Habargidir, iyo diyaarinta iyo ansixinta xeerka golaha Hoggaaminta Habargidir iyo dhismaha golahaas oo tiradiisu gaarayso 68 xubnood. 04 September 2019, Golaha Hoggaaminta wuxuu dhexdiisa ka doortay Guddoomiyaha Golaha oo loo doortay Md Prof. C/qaadir Maxamed Shirwac iyo Guddoomiye ku xigeenkiisa Md Cabdullaahi Cabdille Wehliye .
GO’AANNADA SHIRKA NABADDA HOBYO
1. Golaha Hogaaminta Beesha Habargidir (GHHG) waa gole ay ku midaysan yihiin Beelaha Habargidir, una matalaya fagaarayaasha guud, waxaana si wadajir ah magaca iyo mas’uuliyadda dhanka dhaqanka, siyaasadda, horumarinta bulshada ku hadli kara GHHG ee lagu doortay shirweynaha HG
2. Caleemo-saarka Golaha Hoggaaminta Beesha Habargidir waxaa la qaban doonaa dhammaystirka dhismaha gudiyada golaha kadib. Munaasabaddaas waxaa lagu casuumi doonaa madax-dhaqameedyada beelaha Soomaaliyeed iyo martisharaf kala duwan. Xafladda caleemo-saarka waxay dhaceysaa Sabti, 26/10/2019; waxayna ka dhacaysaa caasimadda Soomaaliya, Muqdisho.
3. Dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug iyo Dhismaha Dawlad Goboleedka
B. Shirka Nabadda Hobyo wuxuu soo dhoweeyey gogosha Dib-u-heshiisinta ee ka furmaysa caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, ayadoo loogu baaqayo dhammaan dhinacyada abaabulkeeda ku lugta leh in farsamada shirkaas wax laga bedelo loona qabto beelaha Galmudug nabadayn dhab ah oo la mid ah tan Hobyo.
T. Shirku wuxuu adkeynayaa in Hanaanka dhismaha Dawlad goboleedka Galmudug uu noqdo mid daahfuran, ay ku wada qanacsan yihiin beelaha Galmudug talana ku leeyihiin, loona madax-baneeyo beelaha kala duwan in ay soo xushaan ciddii u matali lahayd goleyaasha dastuuriga ah iyo guddiyada la dhisayo.
J. Shirku wuxuu ku baaqayaa in dhammaan deegaannada ay Beesha Habargidir degto iyo kuwa ay wax ka degto loo sameeyo Golayaasha Deegaanka, lagana billaabo Degmada Hobyo ee hadda Shirka Nabadda lagu qabtay.
4. Nabadaynta Beelaha Soomaaliyeed
Shirka Nabadda Hobyo wuxuu ku baaqayaa soona dhowaynayaa dhab u heshiisiin dhex-marta beelaha iyo Umadda Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo midnimada umadda iyo jiritaan qaran Soomaaliyeed oo madaxbanaan, ayadoo beeshu ay u ballanqaadayso beelaha kale ee Soomaaliyeed in kaalin lixaad leh ay ka qaadanayso nabadaytna, dhab u heshiisiinta iyo soo celinta qarannimada Soomaaliya.
5. Dekedda HOBYO
Shirka Nabadda Hobyo wuxuu soo dhowaynayaa dadaalka dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladda aan walaalaha nahay ee QATAR ee ku deeqday dhismaha dekadda Hobyo. Hase yeeshee shirweynuhu wuxuu weydiisanayaa dawladda Federaalka Soomaaliya in loo soo bandhigo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kawa Galmudug nuxurka heshiiska dhismaha dekadda Hobyo si xog-ogoal loogu noqdo wax kasta oo ku xeeran heshiiskaas sida waqtiga la bilaabayo dhismaha iyo haddii ay jiraan shuruudo ka horeeya bilowga dhismaha.
Shirweynuhu wuxuu Isla gartay dhismaha Gudi Isku-tashi oo xubnihiisu ka kooban yihiin dhammaan beelaha Galmudug, wuxuuna guddigu si gaar ah uga shaqayn.
41-cisho kadib kulanka guddoonada 17-ka degmo iyo duqa Muqdisho oo qabsoomay
Soomaaliya oo guul weyn ka gaartay cayaar ka mid ah is reeb-reebka koobka adduunka